Madaxweynaha Faransiiska oo uu soo ritay caabuqa Carona Virus.
Thursday December 17, 2020 - 13:58:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay qasriga Élysée ee looga arrimiyo dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in madaxweynaha wadankaasi ninka lagu magacaabo Emmanuel Macron uu laxanuunsanayo caabuqa Carona Virus.
Afhayeen u hadlay madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegay in Macron baaritaan caafimaad lagu sameeyay kadibna laga helay Covid19.
Xukuumadda Paris waxay sheegtay in madaxweynaha lageliyay go'doomin guud oo dhanka caafimaadka ah muddo ku siman 7 maalmood islamarkaana labaajiyay dhammaan safaradii uu ku tagi lahaa dalka dibaddiisa.
Warbaahinta Faransiiska waxay sheegtay in Emmanuel Macron uu kulansaday dhammaan calamaadihii Carona Virus, madaxweynaha Faransiiska ayaa bilihii laso dhaafay dagaal kula jira Islaamka iyo ehelkiisa.
Marcron ayaa bogaadiyay tallaabadii ay shakhsiyaad Faransiiska ah ku aflagaadeeyeen Nabiga SCW isagoo ku tilmaamay mid waafaqsan Xuriyatul qowlka.
Ninkan hadda ladhiban Carona Virus ayaa bishii lasoo dhaafay amray in boqolaal qof muslimiin ah dalka laga masaafuriyo islamarkaana laxiro tobanaan Masjid.
Malaayiin muslimiin ah oo daafaha caalamka ku dhaqan ayaa dhigay dibad baxyo ay ku difaacayaan Nabiga SCW ayna ku habaarayaan dowladda Faransiiska iyo shacabkeeda xaaqidiinta ah.
Cudurka Carona Virus ayaa dilay dad ka badan 59,361 qof Faransiis ah isagoona soo ritay 2.41 malyan oo ruux.